DG OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus : Nankasitraka ny ezaka vitan’ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaDG OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus : Nankasitraka ny ezaka vitan’ny Filoha
09/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny alahady teo no nigadona teto Madagasikara ny Tale Jeneralin’ny OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izao no fitsidihana voalohany, taorian’ny nahalany azy ho Dg Oms ny volana mey 2017. Noraisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha ny tenany omaly, niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny Oms eto Madagasikara , nahitana ny delegasiona avy amin’ny OMS Madagasikara notarihin-dRamatoa Charlotte Ndiaye, ary ny solontena maharitry ny firenena mikambana Ramatoa Violet Kakyomya Kenyana.
Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataony, dia nankasitraka ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana malagasy notarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina izy tamin’ny fahombiazana tamin’ny ady tamin’ny valanaretina Pesta. “Madagasikara dia afaka manafoana ny valanaretina pesta amin’ny alalan’ny fampiasam-bola eo amin’ny rafi-pahasalamany. Tafiditra amin’izany ny fidirana amin’ny fitsaboana tsara kokoa, fiomanana tsara kokoa, fanaraha-maso sy fahafahana mandray an-tanana, ary ny famolavolana ny fitsipika ara-pahasalamana iraisam-pirenena”, hoy izy.
Notsipihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina kosa fa anton’ny fahombiazan’ny ady tamin’ny valanaretina pesta iny, ny fanetsehany ireo rantsa-mangaika rehetra hiatrika ny valanaretina ka mora kokoa ny fiatrehana ny ady. Nanamafy kosa ny OMS fa vonona hanohana ny fitondram-panjakana hamongotra ny valanaretina Pesta eto Madagasikara.
“ Tsapako ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fanohanana ny fahasalamam-bahoaka. Mizotra amin’ny tokony ho izy koa ny fametrahana ilay Couverture Sanitaire Universelle izay tafiditra anatin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra, na ny ODD. Mahavelombolo ihany koa ny ezaky ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ireo fametrahany ny fotodrafitrasa ho an’ny fahasalamana maro manerana ny Nosy”, hoy hatrany ny Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Nisy omaly ny lanonana ofisialy nanamarihana an’izay fankasitrahan’ny OMS ny ezaka vitan’ ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay , tetsy amin’ny Carlton Anosy. Nandritra io fotoana io no nanoloran’ ny Tale Jeneralin’ny OMS ny Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ny mari-pankasitrahana ho an’ny Filoha, tamin’izay ezaka be dia be vitany izay teo amin’ny ady amin’ny valanaretina nisy teto amintsika, indrindra ny valanaretina Pesta.